Wild Things (1998) | MM Movie Store
ပထမဆုံးအနနေဲ့ ဒီကားမှာ sexခနျးတှေ၊ ကွမျးတမျးတဲ့အသုံးအနှုနျးတှေ၊ homosexualအခနျးတှဖေောဖောသီသီ ပါဝငျတာကွောငျ့ မိသားစုနဲ့လုံးဝမကွညျ့ဖို့တဈခကျြသတိပေးပါရစေ။
ဇာတျလမျးမှာအဓိကဇာတျကောငျ ငါးယောကျပါပါတယျသူတို့ကတော့1.ဆမျလှမျဘာဒိုဘလူးဘေးအထကျတနျးကြောငျးကကြောငျးဆရာလေးဆမျကရုပျခြောသဘောကောငျးတဲ့ဆရာလေးမို့လူခဈြလူခငျပေါပွီး ပြိုတိုငျးကွိုကျတဲ့နှငျးဆီခိုငျကွီးပေါ့။အထူးသဖွငျ့ ကြောငျးသူလေးတှအေတှကျကတော့ဆမျဟာသူတို့ရဲ့ပုံပွငျထဲကမငျးသားလေး။
2. ကယျလီဗနျရိုငျယနျကယျလီကတော့ ဘလူးဘေးအထကျတနျးကြောငျးရဲ့ A listစာရငျးဝငျ ခပျဟော့ဟော့ သူဌေးသမီးလေး။သူလေးကလဲ ကြောငျးဆရာကိုအသအေကြေ crushနတေဲ့ ကောငျမလေး။
တဈနမှေ့ာတော့ ကယျလီတဈယောကျကြောငျးဆရာရဲ့အိမျကို ကားသှားဆေးပေးရငျးသူ့ကိုကြောငျးဆရာက မုဒိမျးကငျြ့ပါတယျဆိုပွီးရိုးသားကွိုးစားတဲ့ ကြောငျးဆရာလေးကိုစှပျစှဲလာပါတော့တယျ။
3.ဆူဇနျမာရီတိုလာဆူဇီလို့ချေါကွတဲ့ ဒီကောငျမလေးကတော့ကယျလီလိုပဲ ခပျလနျးလနျးကောငျမလေးဆိုပမေယျ့ကယျလီလိုတော့ မခမျြးသာရှာဘူးမှေးစားမိခငျနဲ့အတူ မွို့စှနျရပျကှကျမှာနရေတဲ့ကောငျမလေး။
အဲ..ကယျလီက ကြောငျးဆရာမုဒိမျးကငျြ့တာခံရပါတယျစှပျစှဲလိုကျတော့ တဈမွို့လုံးမယုံကွညျနိူငျ ဖွဈနကွေခြိနျမှာဆူဇီကလဲ ဒီကြောငျးဆရာဟာ သူ့ကိုလဲ ဒီလိုပဲကငျြ့ခဲ့ဖူးကွောငျးအရငျတုနျးကပွောရငျ ဘယျသူမှမယုံမှာစိုးလို့ မပွောခဲ့တာဖွဈကွောငျးထပျပွီးထုတျပွောလာပါတယျ။
ဒီအခြိနျမှာ ကြောငျးဆရာလေးကတကယျပဲမုဒိမျးကငျြ့တယျလို့ တခြို့တှယေုံလာကွပါတယျ။4,5. စုံထောကျရေးဒူကတျ နဲ့ ဂလျောရီယာသူတို့ကတော့ ကြောငျးဆရာလေးဆမျရဲ့အမှုကိုအဓိကကိုငျတှယျကွမယျ့သူတှပေါ။သူတို့နှဈယောကျထဲက စုံထောကျမလေး ဂလျောရီယာကလဲကြောငျးဆရာကိုကွိတျကွှနေပေါသေးတယျ။
ဒါကတော့ဇာတျလမျးရဲ့ အစကြောငျးဆရာလေးဆမျရဲ့အမှုဖွဈပျေါလာပုံဖွဈပါတယျ။spoilerမဟုတျပါဘူး ဒါဟာဇာတျလမျးရဲ့အစပိုငျးလေးပဲရှိပါသေးတယျ။နောကျပိုငျးမှာ ဇာတျလမျးရဲ့ ထငျမထားတဲ့အခြိုးအကှအေ့ခြိတျအဆကျတှကေ ပရိတျသတျကိုပါးစပျအဟောငျးသား ဖွဈစပေါလိမျ့မယျ။
အညှီအဟောကျအခနျးလေးတှလေဲပါမှဇာတျအိမျကလဲခိုငျမှ မငျးသားမငျးသမီးကလဲခြောမှtwistတှကေလဲကွမျးမှ ကွညျ့ခငျြတယျဆိုသူတှအေတှကျကတော့ Wild Things ဟာလုံးဝကိုလကျလှတျမခံသငျ့တဲ့ဘကေုနျရကြိုးနပျမယျ့ကားကောငျးတဈကားဖွဈတဲ့အကွောငျးအာမခံလိုကျပါတယျ။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဒီကားမှာ sexခန်းတွေ၊ ကြမ်းတမ်းတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေ၊ homosexualအခန်းတွေဖောဖောသီသီ ပါဝင်တာကြောင့် မိသားစုနဲ့လုံးဝမကြည့်ဖို့တစ်ချက်သတိပေးပါရစေ။
ဇာတ်လမ်းမှာအဓိကဇာတ်ကောင် ငါးယောက်ပါပါတယ်သူတို့ကတော့1.ဆမ်လွမ်ဘာဒိုဘလူးဘေးအထက်တန်းကျောင်းကကျောင်းဆရာလေးဆမ်ကရုပ်ချောသဘောကောင်းတဲ့ဆရာလေးမို့လူချစ်လူခင်ပေါပြီး ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းဆီခိုင်ကြီးပေါ့။အထူးသဖြင့် ကျောင်းသူလေးတွေအတွက်ကတော့ဆမ်ဟာသူတို့ရဲ့ပုံပြင်ထဲကမင်းသားလေး။
2. ကယ်လီဗန်ရိုင်ယန်ကယ်လီကတော့ ဘလူးဘေးအထက်တန်းကျောင်းရဲ့ A listစာရင်းဝင် ခပ်ဟော့ဟော့ သူဌေးသမီးလေး။သူလေးကလဲ ကျောင်းဆရာကိုအသေအကျေ crushနေတဲ့ ကောင်မလေး။
တစ်နေ့မှာတော့ ကယ်လီတစ်ယောက်ကျောင်းဆရာရဲ့အိမ်ကို ကားသွားဆေးပေးရင်းသူ့ကိုကျောင်းဆရာက မုဒိမ်းကျင့်ပါတယ်ဆိုပြီးရိုးသားကြိုးစားတဲ့ ကျောင်းဆရာလေးကိုစွပ်စွဲလာပါတော့တယ်။
3.ဆူဇန်မာရီတိုလာဆူဇီလို့ခေါ်ကြတဲ့ ဒီကောင်မလေးကတော့ကယ်လီလိုပဲ ခပ်လန်းလန်းကောင်မလေးဆိုပေမယ့်ကယ်လီလိုတော့ မချမ်းသာရှာဘူးမွေးစားမိခင်နဲ့အတူ မြို့စွန်ရပ်ကွက်မှာနေရတဲ့ကောင်မလေး။
အဲ..ကယ်လီက ကျောင်းဆရာမုဒိမ်းကျင့်တာခံရပါတယ်စွပ်စွဲလိုက်တော့ တစ်မြို့လုံးမယုံကြည်နိူင် ဖြစ်နေကြချိန်မှာဆူဇီကလဲ ဒီကျောင်းဆရာဟာ သူ့ကိုလဲ ဒီလိုပဲကျင့်ခဲ့ဖူးကြောင်းအရင်တုန်းကပြောရင် ဘယ်သူမှမယုံမှာစိုးလို့ မပြောခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းထပ်ပြီးထုတ်ပြောလာပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ ကျောင်းဆရာလေးကတကယ်ပဲမုဒိမ်းကျင့်တယ်လို့ တချို့တွေယုံလာကြပါတယ်။4,5. စုံထောက်ရေးဒူကတ် နဲ့ ဂလော်ရီယာသူတို့ကတော့ ကျောင်းဆရာလေးဆမ်ရဲ့အမှုကိုအဓိကကိုင်တွယ်ကြမယ့်သူတွေပါ။သူတို့နှစ်ယောက်ထဲက စုံထောက်မလေး ဂလော်ရီယာကလဲကျောင်းဆရာကိုကြိတ်ကြွေနေပါသေးတယ်။
ဒါကတော့ဇာတ်လမ်းရဲ့ အစကျောင်းဆရာလေးဆမ်ရဲ့အမှုဖြစ်ပေါ်လာပုံဖြစ်ပါတယ်။spoilerမဟုတ်ပါဘူး ဒါဟာဇာတ်လမ်းရဲ့အစပိုင်းလေးပဲရှိပါသေးတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ ဇာတ်လမ်းရဲ့ ထင်မထားတဲ့အချိုးအကွေ့အချိတ်အဆက်တွေက ပရိတ်သတ်ကိုပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
အညှီအဟောက်အခန်းလေးတွေလဲပါမှဇာတ်အိမ်ကလဲခိုင်မှ မင်းသားမင်းသမီးကလဲချောမှtwistတွေကလဲကြမ်းမှ ကြည့်ချင်တယ်ဆိုသူတွေအတွက်ကတော့ Wild Things ဟာလုံးဝကိုလက်လွတ်မခံသင့်တဲ့ဘေကုန်ရကျိုးနပ်မယ့်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့အကြောင်းအာမခံလိုက်ပါတယ်။